यस्तै हो भने नेपालको हालत पनि इटाली, अमेरिका जस्तै होला | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal यस्तै हो भने नेपालको हालत पनि इटाली, अमेरिका जस्तै होला | एक्सप्रेस | GNN Nepal
हामी भन्दा पनि विकसित मुलुकहरुले कोरोना रोक्न सकेका छैनन् भने अझ हाम्रो जस्तो देशमा कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर चल्यो भने हालत के होला भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।
छिमेकी मुलुकबाट हामीले केही सिकेर अहिलेबाट नै सचेत हुन जरुरी छ । ताकि हामीले भविष्यमा पछुताउनु नपरोस।अहिलेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपालले दोस्रो र तेस्रो लहरको कोरोनाको लागि केही पनि तयारी नगरेको देखिन्छ। येस्तै रहिरहने हो भने अबको एकदुई महिनामै नेपालमा कोरोनाको बिगबिगी बढ्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकारले अहिले एउटा सूचना निकालेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने पटक्कै भएको देखिदैन। त्यही एउटा सूचनाको भरमा नेपाल सरकार ढुक्क छ कि कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर नेपालमा देखिने छैन। नेपाल सरकार कोरोना फैलिंदैन भन्दै ढुक्कका साथ पन्छिन खोजिरहेको छ।
नेपाल सरकारले अब पनि केहि गृहकार्य नगरी चुपचाप बस्यो भने नेपालको अवस्था स्पेन, इटाली, अमेरिका जस्तो बन्न केहीबेर पनि लाग्ने छैन। समय छदैं कोरोनाबाट हुनसक्ने नोक्सानीबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू खोज्न सक्नुपर्छ, कार्यविधि बनाउनुपर्छ र त्यसको पालना पनि गराउन सक्नुपर्छ।
युवायुवतिहरुले कोरोना भाइरसलाई अलि बढी नजरअन्दाज गरेजस्तो देखिन्छ। तर युवाले यस्तै बेफिक्री चाल देखाउने हो भने कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्न मुख्य संवाहक बन्ने जोखिम यही समूहमा उच्च देखिन्छ। दक्षिणी नाका छेउछाउ बस्ने जनसंख्या यसको उच्च जोखिममा देखिएको छ। त्यतातिर पनि हाम्रो पर्याप्त ध्यान नगएको हो कि ?
त्यसैले समय छदै भइपरी (भविष्यमा) आउने समस्यासँग जुध्न तयार भएर बसौ । समय छँदै समस्याको बाटो नखोजे पछि नेपालको हालत पनि स्पेन, ईटाली र अमेरिका जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले आजैबाट भइ परिआउने समस्याको समाधान खोज्न तिर लागौ।
अन्ततस् भिडभाडमा नजाउ, माक्स लगाउँ, साबुन पानी वा सेनिटाइजर को प्रयोग गरौ ,बिना कुनै काम घरबाहिर ननिस्कौ। कोरोनाबाट आफु बचौ अरुलाई बचाऔ।
लेखक : बाल गोपाल देवकोटा
जुम्ला घर भएका देवकोटा एभरेस्ट इन्जिनियरिङ्ग कलेज सानेपा, ललितपुरका ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ्ग तेस्रो वर्षमा अध्यनरत विद्यार्थी हुन् । उनले साहित्यिक र समसामयिक बिषयमा कलम चलाउन रूचाउँछन्।
के-के भयो आज दिनभर ? हेर्नुहोस् मुख्य खबरहरु
ओली र मोदीबिच टेलिफोन संवाद